Kooxda Isbuuca Premier League: 11kii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Todobaadkan Horyaalka Ingariiska Oo La Soo Saaray | Laacib.net
Kooxda Isbuuca Premier League: 11kii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Todobaadkan Horyaalka Ingariiska Oo La Soo Saaray
Liverpool ayaa dheereysatay guulahooda xilli ciyaareedka Premier League ka dib markii ay 2-1 ku garaaceen Chelsea laakiin Manchester City ayaa cadaadis ku heysa weli markii ay xasuuqeen Watford.
Kooxda Pep Guardiola waxa ay 8-0 ku xaaqeen Watford laakiin waxa ay weli shan dhibcood ka danbeeyaan Reds.
Dhanka kale Manchester United ayaa guuldarro 2-0 ay ka soo gaartay West Ham halka Leicester City ay 2-1 ku garaacday Tottenham, Sheff United waxay guul lama filaan ah ka gaartay Everton.
Khabiirka BBC Sport Garth Crooks ayaa soo xushay shaxda isbuucaan ugu fiicneyd horyaalka Premier League.
Goolhayaha todobaadka waxaa noqday goolhayaha kooxda Liverpool Adrian kaasoo fursado dhowr ah ka beeniyay kooxda Chelsea kulankii Reds ay ka badisay Blues.
Afarta daafaca danbe waxaa ku soo baxay isbuucaan Nathan Ake oo shabaqa u soo taabtay Bournemouthn kulankii ay ka badiyeen Southampton iyo Schar oo qeyb libaax leh ka qaatay barbarihii goolal la’aanta ay kooxdiisa Newcastle la gashay Brighton ayaa noqday daafacyada dhexe ee ugu fiicnaa isbuucaan.
Daafacyada garbaha xiddiga Leicester City Pereira oo barbareeyay Tottenham kulankii ay ka badiyeen Spurs iyo Basham oo si weyn kubada uga difaacday Everton kulankii ay kooxdiisa Sheff United badisay.
Khadka dhexe waxaa ka soo muuqday labada xiddig ee Manchester City Bernando Silva oo seddexleey dhaliyay kulankii ay Watford xasuuqeen iyo De Bruyne oo ahaa xiddiga garoonka ka soo koontaroolay ciyaartaas islamarkaana labo caawin ah sameeyay.
Waxaa ku wehliya James Madisson oo xiddiga garoonka noqday kulankii ay Leicester ka badisay Spurs isagoo goolka guusha dhaliyay iyo Noble oo isna qaab ciyaareed uu ku noqday xiddiga garoonka soo bandhigay kulankii ay West Ham garaacday Manchester United.
Labada weeraryahan ee afka hore waa kuwa guulaha u sahlay Arsenal iyo Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyay goolkii guusha ee ay Gunners ku garaacday Aston Villa halka Firmino uu Reds u saxiixay goolkii labaad ee ciyaarta oo noqday goolkii ay ku badiyeen.
9 responses to “Kooxda Isbuuca Premier League: 11kii Xiddig Ee Ugu Fiicnaa Todobaadkan Horyaalka Ingariiska Oo La Soo Saaray”
9Bukki ayaan ka dhigi lha
kente maxaaa loogusoodari waayay wacdaro ayuu sameeyah ee waaa lahagradey
aaway coundozi o xlay shaqeyay mida kle arsenal 10 nin 3 gool kh dhalisay kuna badisay
Waxan ahay taageereally city ah Lkn mee kante
Asc salan kadib bahda warkeysa waxan ishega waxatihii tagero goni markast arsenal waas lidaa mafahisaa markast si aan jirin ayaa aga hadshaan sas lama rano si koxaha kali utafatira hadikale haba soo qadanina nagadaya kuna soo dara horyalka talyaniga fagahintiis
Beenaleyaal aa tahiin
Abdihakin Halanae says:
shadaaan ani waxaan dhihi lahaaa dad aan mudnayn baa lagusoo daray sida FIRMINO o kale
waxaa kamudnaa BERNADO SILVER mxa yelay sedley buu soo dhaliyay kulankii
wxaana kalo mudnaa in lagu sodaro N.KANTE
abdihakin halanae adiga ciyaal batahay ee duqeyda haso daxgaliin